स्कुलमा छोडेर हस्पिटल जान्छु भन्दै हिडेकि ममि बेपत्ता, तस्बिर लिएर गाउगाउ हिड्दै छोरी – Dainik Samchar
March 17, 2021 374
यी स-साना नानीहरू जस्ले आफ्नि आमाको तस्बिरलाई हातमा लिएर गाउभरि डुल्छिन् । यहाँ श्रिमान बिदेशबाट नेपाल आएको केही दिनमै श्रीमती बेपत्ता भएकि छन् । पाच अनि नौ बर्षका छोरिहरुलाई स्कुलको गेट अगाडि छोडेर हस्पिटल जान्छु भन्दै हिडेकि र आज १६ दिन बितिसक्दा पनि घर फर्केर आएकि छैनन् ।
बिदेशमा रहेका श्रिमान अर्थात ती दूई छोरिका पितासग भने आफ्नो ममिले केही मिनेट मात्रै फोनमा बोल्ने तर अन्यत्र मान्छेसग घन्टौ बोल्ने गरेको समेत ती छोरिहरुले खुलाएका छन् । बिदेशमा घर परिवारकै लागि भन्दै रातोदिन परिश्रम गर्ने श्रिमान यता श्रीमती भने अरुसगै मस्ति ।अझ श्रिमानले छोरिहरुको स्कुलको फिस तिर्न भन्दै पठाइदिएको पैसा, फिस नै नतिरेको पाइयो ।
यो पनि पढ्नु होस:-एसईई परीक्षा जेठ १३ गतेबाट हुने, कक्षा १२ को जेष्ठ २६ बाट
फाल्गुन २५, काठमाण्डौं । यस वर्षको एसईई तथा कक्षा १२ को परीक्षा आगामी जेठमा हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यो पनि पढ्नु होस :- उर्लाबारी युवक मृ’त्यु प्रकरणबारे आयो नसोचेको खुसीको खबर।हार्दिक बधाई सदीक्षा बहिनीलाई।
उर्लाबारी युवक मृ’त्यु प्रकरणबारे आयो नसोचेको खुसीको खबर।हार्दिक बधाई सदीक्षा बहिनीलाई खुसीको खबर !! उर्लाबारी युवक मृ’त्यु प्रकरण’मा बहिनी सदीक्षा’को साहस’ले मु’द्दा अदालत’मा पु’ग्यो
।सदीक्षा बाँस्तोला अमेरिकाको टेक्सासमा पाइलटको तालिम लिइरहेकी थिइन् । पुस ५ गते राति अचानक फोनको घण्टी बज्यो । त्यसपछि जुरुक्क उठेकी उनी अहिले पनि राम्ररी सुत्न सकेकी छैनन् ।
दाजु प्रवीणको मृत्युको खबरले उनी घर फर्कने तयारीमा लागिन् । र, तीन दिनपछि उर्लाबारी आइपुगिन् । ‘सक्नै लागेको पढाइ गर्न त जीवन बाँकी छ ।
तर एक्लो दाजुको मुख फेरि हेर्न नपाउने भएकाले तत्काल प्लेन चढेर आएँ,’ उनले भनिन्, ‘घटनाबारे बुझ्दा दाजुको सा’मान्य मृ’त्यु न’भई ह’ त्या नै भए’को निष्कर्ष’मा पुगें ।’ पटकपटक गएर इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा बुझ्दा अ’नुसन्धान भइरहेको भन्ने तर किटानी जाहेरी लिन नमान्ने गरेको उनले सुनाइन् ।
‘पो’स्टमार्टम रि’पोर्ट आए’पछि मात्रै कि’टानी जा’हेरी लियो । त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मु’द्दा न’चल्ने भ’न्दै दुई पटक फाइल फिर्ता गरेको पनि जानकारी पायौं ।’
ह’ त्या घ’टना भए पनि प्रहरीले संलग्न भए’को आ’रोप’मा प’क्राउ प’रेका’लाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएपछि झन् शंका थपिएको उनले बताइन् ।
कि’टानी जाहेरी दिएको ४/५ दिनमै पक्राउ परेकाहरू’लाई सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरको आदेशमा प्रहरी’ले छाडेको थियो । अ’नुसन्धान’मा प्रहरी’ले ढिलासुस्ती गर्दै घ’टना दबाउन खोजेको भन्दै आफन्तको साथमा सदीक्षा आइतबार इलाका प्रहरी कार्यालय पुगिन् ।
‘कस्तो अ’नुसन्धा’न भइरहेको भनेर प्रहरीसँग सोधखोज गर्‍यौं । फाइल देखाउन दबाब दियौं,’ उनले भनिन्, ‘फाइल हेर्दा त दाजुको फोटोमा फोटोसप गरी अर्कै फोटो राखेको फेला पर्‍यो ।’ फर्जी फोटो राख्ने प्रहरीले अ’नुसन्धानमा अरू के–के गरेको होला भन्ने मनमा प्रश्न आएको उनले सुनाइन् ।
त्यसपछि उनले प्रहरी ला’प’रबाही’बारे जानकारी गराउँदै फेसबुकमा लाइभ गरिन् । उनले गरेको लाइभमा प्रहरीले तत्काल अर्को फाइल खडा गरेको समेत रेकर्ड भएको छ ।
ह’ त्या घटना’मा प्रहरी अनुसन्धानमा भएको ढिलासुस्ती, प्रहरीको शं’कास्प’द गतिविधि’लाई लिएर चौतर्फी सत्यतथ्य छान’बिन’को आवाज उठिरहेको छ ।
उनको अगुवाइमा भएको दबाब’ले जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईको नेतृत्वमा छानबिन टोलीसमेत गठन भएर अ’नुस’न्धान भइरहेको छ । सदीक्षाको आवाज’ले ह’त्या घट’ना न्यायालय’सम्म आइपुगे’को स्थानीय बताउँछन् ।
Prevप्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गर्ने ओलीको चाहना
Nextजन्ती जाँदा बेपत्ता भएका १४ वर्षीय बालक यस्तो अवस्तामा भेटिए !!!